पार्टी बैठकमा कोसँग किन डराए प्रधानमन्त्री ओली ? प्रचण्डसँग हिजै राखेका थिए यस्तो माग — Sanchar Kendra
पार्टी बैठकमा कोसँग किन डराए प्रधानमन्त्री ओली ? प्रचण्डसँग हिजै राखेका थिए यस्तो माग
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बैठकको अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष द्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन मन्तब्य राखे ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई घण्टा लामो सम्बोधन गरेर हिँडेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हंगामा मच्चिएको छ ।